Ndị na -emepụta ihe nkiri na ndị na -ebubata ya - China Trailer Factory
Ogologo Ọdịdị 12,500mm Obosara 2,490mm Height Ihe dị ka 1,600@ibudata Ebe Nkwụ Pin Ihe dị ka 1,000mm site na ihu nkwado n'ihu. Ọnọdụ ọdịda ọdịda ihe dị ka 2,500mm site na ntụtụ eze. Axle Spacer Ihe dịka 8,030mm+1,310mm+1,310mm King Pin Height Ihe dị ka 1,406mm nwere ọkwa chassis Weight Tare Weight Ihe dị ka 7,100kg Max. Payload 40,000kg Gross Vehicle Weight dị 67,100kg Steel Structure Materials High ike ala alloy steel Q345B maka welded I ...
Ogologo Ọdịdị 12,340mm Obosara 2,490mm Height dị ihe dị ka 1,600@ibudata ebe a na -akpọ King Pin Ihe dị ka 1,000mm site n'ihu ihu nkwado n'ihu. Ọnọdụ ọdịda ọdịda ihe dị ka 2,500mm site na ntụtụ eze. Axle Spacer Ihe dịka 8,030mm+1,310mm+1,310mm King Pin Height Ihe dịka 1,390mm nwere ọkwa chassis Weight Tare Weight dị ihe dị ka 5,600kg Max. Payload 32,000kg Gross Vehicle Weight dị 37,600kg Steel Structure Materials High ike ala alloy steel Q345B maka weld ...
Ogologo mkpokọta izugbe n'ogologo 13000mm*obosara 3000mm*ịdị elu 1650mm oche mbadamba ogologo 8800mm*obosara 3000mm na -ebuli elu ihe ndina 1050mm ikike ịkwa iko 40000kg na -agba ọsọ na -agba ọsọ 3 nkwụsị axle akwukwo mmiri nwere taya na -ahazi taya 8.25R20, 12units, na -enweghị taya axles Fuwa axle, 13 ikike nke ọ bụla, 3 axles Breeki Dual lines pneumatic brake system, ụlọ ikuku T30/30; ụgbọala breeki. N'okpuru Frame Main Beam I udi, akụkụ 500*18*20*12, Q345 steel b ...
Ogologo Ọdịdị 13,000mm Obosara 2,500mm Height 2,900@ibudata Igbe ahụ Akụkụ 12280mm*2300mm*1200mm (mgbidi akụkụ 600mm +oghere 200mm +ngere 400mm) King Pin Location Ihe dị ka 1,100mm site na ihu nke nkwado n'ihu. Ọnọdụ ọdịda ọdịda ihe dịka 2,520mm site na ntụtụ eze. Axle Spacer Ihe dịka 7,000mm+1,310mm+1,310mm King Pin Height Ihe dị ka 1,290mm nwere ọkwa chassis Weight Tare Weight 8,500kg Max. Payload: 60,000kg Gross Vehicle arọ 68,500kg Steel Struc ...
Nnukwu ihe nkiri egwu simenti 40ton
Nlereanya: ST9400GFL Dimension Dimension (mm) 11,000*2,500*3,950 King Pin Location (mm) 1,300 site na ihu n'ihu ihe nkwado n'ihu. Ọnọdụ ọdịda ọdịda (mm) 2,520 site na pin eze (ma ọ bụ dị ka ụgbọ ala traktọ) Axle Spacer (mm) 6,280+1,310+1,310 King Pin Height (mm) 1,390 nwere ọkwa chassis (ma ọ bụ dabere na gwongworo traktọ) Ike Tank (cbm) 40 Ogologo ụgbọ njem kwụ ọtọ (mm) 5000 Vetikal na -ebugharị ogologo (mm) 15000 Nkezi mwepụta ọpụrụiche ...
Tri-axle mmanụ ụgbọ ala nke na-adọkpụ 40m3 20161107
GENERAL N'ozuzu Dimension 13,000mm*2,500mm*3,900mm (L*W*H) King Pin Setting 1,450mm Paykwụ Ibu 34,000kg Curb Weight 12,700kg Nkwụsị nkwụsị GEAR N'okpuru nkwanye mgbatị atọ nwere ihe nhazi, 11-akwụkwọ isi iyi Hub Cast steel 10 studs, mmanụ akàrà Taya 12.00-20, 12units na otu taya ngwongwo Axles Ibu ikike 13 tọn n'otu axle, 3pcs Brakes Dual lines pneumatic brake system; Valvụ ọsọ agba anọ na mberede; 30/30 ụlọ, ikuku-actuated tank tank ikike 40 cbm tank ihe Ste ...